AKHRISO: Maxaa ka soo baxay kulan aan caadi aheyn oo yeesheen Wasiiradda Puntland? – Puntlandtimes
AKHRISO: Maxaa ka soo baxay kulan aan caadi aheyn oo yeesheen Wasiiradda Puntland?
GAROOWE(P-TIMES)- Kulan aan caadi aheyn oo ay yeesheen xubnaha Golaha Wasiiradda Puntland, uuna shir gudoomiyey Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Max’ed Cali Gaas, kana qeybgalay kuxigeenkiisa Eng, CabdiXakiim Xaaji CUmar ayaa looga hadlay qodobada ku saabsan Amniga gudaha, Siyaasadda Faderaalka, Shirkii Kismaayo, wadada Garoowe & Gaalkacyo isku xirta oo ay Jarmalku cadeeyeen in lagu fashilmay.
Kulanka intii uu socday waxaa dood dheer laga yeeshay arrimaha Amniga Puntland, waxaana lasoo qaaday warar kala gedisan.
Puntland, waxay kaloo ka hadashay markii ugu horeysay Mashruuca fashilmay ee wadada Gaalkacyo & Garoowe, waxay sheegeen in wadadaas wax laga qabtay 40KM oo kamid ah oo hadda Laami la saarayo, taasna ay cadeynayso in aysan fashilmin wadada.
Golaha wasiiraddu waxay kaloo isku raaceen in Puntland ay si buuxda u ayidsan tahay go`aamadii kasoo baxay shirkii Dawlad gobaleedyada ee Kismaayo, lana hakiyey wada shaqeyntii Puntland iyo dawladda Faderaalka Soomaaliya, ayna xooga saarayaan sidii loo ilaalin lahaa nidaamka Faderaalka ee dalka.